Fanadinana bakalorea: mitaintaina ireo mpiadina jamba sivy mianadahy | NewsMada
Fanadinana bakalorea: mitaintaina ireo mpiadina jamba sivy mianadahy
Par Taratra sur 14/09/2018
Sivy mianadahy ireo tanora sembana amin’ny fahitana na jamba hiatrika fanadinana bakalorea amin’ity taona ity. Avy ao an-tampon-tanànan’Antsirabe ny telo mirahalahy amin’izy ireo raha toa ka avy ao Antananarivo, saingy hiatrika ny adina ao Antsirabe, kosa ny telo. Avy ao Ambositra ny fahafito ary samy avy ao Farafangana ny roa mianadahy sisa.
Telo andro mialoha ny fanadinana, mitaintaina izy ireo satria tsy mbola mahazo toky amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony tarihin-dramatoa Rasoazananera Marie Monique na efa voadika soratra “braille” na tsia ny laza adina ampiasain’izy ireo mandritra ny fanadinana.
Raha ny tokony ho izy, ora sy fotoana mitovy, laza adina mitovy, saingy voadikan’ny minisitera tompon’andraikitra mialoha amin’ny soratra “braille” ny atrehin’ny mpiadina jamba. Fantatra, araka ny voalazan’andriamatoa Ratobimiarana Haingo, mpandrindra ny tetikasa Voatra asa tantanin’ny federasion’ny fikambanan’ny jamba eto Madagasikara, fa sady miandry ny fanadinana ireto tanora jamba no mitaintain-dava.
Tamin’ny taon-dasa, saika tsy afaka niatrika fanadinana bakalaorea ny tanora efatra mianadahy tao Ambositra raha tsy ny solontenan’ny fivondronamben’ny fikambanan’ny olona jamba ao Antsirabe no tonga tsy nantsoina ary nosamborina tamin’ny ora farany, nisahana ny fandikana ny laza adina ho soratra “braille”.
Fantatra indray izao, araka ny resaka nampitain’ireo mpitondra tenin’ny olona jamba niresaka tamin’ny tompon’andraikitry ny fanadinana bakalaorea tao Fianarantsoa, fa tsy mbola hisy indray izany amin’io herinandro io.
Tsy nisy mihitsy fampitam-baovao ho an’ireo mpiadina na ireo fikambanana afaka miahy azy ireo ny momba izany.
“Kely tsy mba mamindro izahay”, hoy ireo tanora jamba miezaka mianatra ireto. Tsy raharahan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny aminay satria vitsy anisa izahay kanefa te hiezaka tsy ho vesatry ny fiarahamonina.